Ampidino Cooking Simulator APK ho an'ny Android
Ampidino Cooking Simulator
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Android (63.00 MB)
Ampidino Cooking Simulator,
Cooking Simulator no simulator fandrahoan-tsakafo vaovao sy lalao an-dakozia. Miomàna hanombohana ny dianao mahandro aminny simulator fandrahoana!
Ampidino ny Simulator Cooking
Milalao lalao fisakafoanana ve ianao, mahandro mahandro, lalao fanaova-mofo, lalao sakafo haingana na lalao fanafarana sakafo? Tianao ny mahandro? Tianao ny lalao simulation? Ianao ve mpankafy lalao fandrahoan-tsakafo fitantanana fotoana mampiankin-doha? Raha ENY dia eo aminny toerana mety ianao. Finday Simulasi mahandro sakafo: Lalao Kitchen sy Cooking no lalao mety aminao.
Cooking Simulator Mobile: Kitchen & Cooking Game dia lalao simulator lakozia maimaim-poana tsy manam-paharoa ho anny rehetra. Endri-javatra izay mahasarika sy mahafinaritra ny Cooking Simulator Mobile:
Vohay ny fomba fahandro nandroso, mahandro sakafo matsiro ary tongava mpahandro virtoaly malaza.
Sary mahavariana sy vokatra tsara hita maso
Lakozia tena misy zava-misy, be fientanentanana, feno fitaovana
Sakafo azo omanina (Mahandro sy manomana sakafo tena matsiro: lasopy voatabia, steak steak ary ovy nandrahoina, trout namboarina, cutlet ovy nendasina, paty nendasina, lasopy voatavo haingana, tuna nendasina, steak, french fries, penne misy saosy broccoli, tratranny gana paoma, ary maro hafa)
Mampiasà kojakoja an-dakozia isan-karazany (lapoaly, lapoaly, lovia lehibe, lovia kely, lovia lalina, lapoaly, lapoaly, saosy kely, takelaka fanapahana, colanders, lapoaly, antsy, blender ary maro hafa)
Hatsarao ny fahaizanao mahandro sy ny fahaiza-mitantana fotoana.
Zava-manitra am-polony (sakamalao, sira, dipoavatra, menaka oliva, thyme, balsamic, vinaingitra, basil, siramamy, allspice ary maro hafa)
Lalao lakozia sy fandrahoan-tsakafo tena mampiankin-doha!
Ataovy miavaka ny lakoziananao (gorodona, rindrina, valindrihana ary maro hafa)
Lalao fitantanana fotoana mampiankin-doha
Asehoy ny fahaizanny chef
Mora azo, sarotra ny mahafehy!
Cooking Simulator Specs
Haben'ny rakitra: 63.00 MB